याहू ह्याकले यसको सबै प्रयोगकर्ता खाताहरूलाई प्रभावित गर्‍यो ग्याजेट समाचार
याहू झूट बोल्दैन, र यदि होईन भने कम से कम यो यस्तो प्रभाव हो कि यसले यसको सुरक्षा त्रुटिहरूमा सम्बन्ध दिन्छ।
२०१ 2013 मा, याहूको आक्रमण भयो सबै billion अर्ब प्रयोगकर्ता खाताहरू पर्दाफाश गरियो यद्यपि यो जानकारी अब खुलासा गरिएको छ किनकि पहिले, र के भएको मात्र तीन वर्ष पछि प्रदान गरिएको तथ्या .्क एकदम कम थियो।
याहूले भोगेका ह्याकबाट कोही पनि उम्केनन्
अगस्त २०१ 2013 मा याहूले सामना गरेको विशाल डाटा उल्ल .्घनले त्यस समयमा सक्रिय रहेको कम्पनीको billion अर्ब प्रयोगकर्ता खाताहरूलाई असर गर्यो। यो कसरी हो प्रेस विज्ञप्ति याहूको अभिभावक कम्पनी Verizon, हाल यो कम्पनीले यस वर्षको सुरूमा लिईएको बमोजिम जारी गरिएको हो। तर, सत्य यो हो कुलमा पुग्न नसकेसम्म प्रभावितको संख्या समयको साथ बढेको छ.
जब समस्या प्रकाशमा आयो, र यो घटना पछि तीन बर्ष सम्म थिएन, २०१ 2016 मा, पहिलो तथ्यांकले million०० करोड प्रभावित खाताहरूको बारेमा भने। त्यसको लगत्तै याहूले दावी गरे कि ह्याकले १ अर्ब खाताहरूलाई असर गर्यो, त्यो हो त्यस समयमा अस्तित्वमा रहेका खाताहरूको कुल स number्ख्याको एक तिहाइ। र अब, तथ्य भन्दा चार बर्ष पछि, यो Verizon ले पुष्टि गर्दछ कि, नयाँ उपलब्ध टेक्नोलोजी र अनुसन्धान कार्यलाई धन्यवाद "बाह्य फोरेंसिक विशेषज्ञहरूको सहयोगमा" गरिएको छ, आक्रमण धेरै गम्भीर थियो किनकि यसले २०१ Yah मा सबै याहू खाताहरूलाई असर गर्यो.
याद गर्नुहोस् कि जानकारी समावेश भयो नाम, ईमेल ठेगानाहरू, फोन नम्बर, जन्म मिति, पासवर्डका साथै सुरक्षा प्रश्न र उत्तरहरू दुबै ईन्क्रिप्टेड र ईनक्रिप्टेड। डाटाको बारे जस्तै बैंक खाताहरू वा क्रेडिट र / वा डेबिट कार्डमा जानकारी, यो अझै स्पष्ट छैन कि तिनीहरू खुलाइएको थियो वा थिएन।
यसैबीच, भेरिजोन भन्छन कि याहू टोलीले सुरक्षा सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। कसरी विश्वास गर्ने !?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » याहू ह्याकले उनीहरूको सबै प्रयोगकर्ता खाताहरूमा असर पुर्‍यायो